Deeq dhar ah oo maanta Cadaado loogu qaybiyay Qoysas sabool ah “SAWIRRO” | Radio Muqdisho
Deeq dhar ah oo maanta Cadaado loogu qaybiyay Qoysas sabool ah “SAWIRRO”
Published on February 21, 2013 by admin · 3 Comments · 2,302 views
Boqolaal ka mid ah Qoysaska saboolka ah ee ku nool magaalada Cadaado ayaa waxaa maanta deeq dhar ah gaarsiiyay Mu’asasada waxbarashada ee Iftiin.
Deeqdan dharka ah ee saaka loo qaybiyay Qoysaska saboolka ah ee ku dhaqan magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa soo dhiibay Hay’adda RAJO, iyadoo qaybinteeda u soo wakiilatay mu’asasada waxbarashada ee Iftiin.
Boqolaal ka mid ah Qaysaska saboolka ah ayaa ka faa’iidaystay dhar qaybinta, iyadoo ay qaabka ay qaybintu u socotay ay kormeerayeen mas’uuliyiin ka mid ah maamulka Ximan iyo Xeeb.
Agaasimaha mu’asasada Iftiin qaybta Gobolada dhexe C/llahi Sh Xassan Muxumud ayaa faahfaahin ka bixiyay dharkan iyo inta Ruux ee la siiyay, isagoo sheegay in dharkaasi uu gaarayay ilaa 700- oo shay lana siiyay 250-Ruux, sidoo kalena ay gaarsiindoonaan magaalooyin kale oo gobolada dhexe ka mid ah.
Agaasimaha wasaarada arrimaha gudaha Ximan iyo Xeeb C/llahi Cabdi Geedi ayaa arrin wanaagsan ku tilmaay mucaawinada dharka ah ee maanta Qoysaskan la gaarsiiyay, waxaana uu talaabadaasi ku tilmaamay mid ku dayasho mudan.
Qoysaska dharka loo qaybiyay waxa ay soo dhaweeyeen kaalmada ay ka heleen Mu’asasda Iftiin iyo RAJO, iyagoo tilmaamay inay baahi wayn u qabeen oo aysan jirin cid hadda ka hor ka saaciday arrintaasi.
Photo By:-Maxamuud Cabdi Diirshe
Abdillahi says:	February 22, 2013 at 3:43 am	Allah ha itself gaaro kuwa masaakiinta caawiya.
Reply »	haggi says:	February 22, 2013 at 4:14 pm	masha allah waa wax aad loogu farxo iftiin aad bey u mahadanyihiin
Reply »	caafi says:	February 23, 2013 at 11:17 am	good job lakiin waxaad bixiney saan iyo waxa dadka xiran yahiin isku mid ma ahan ee jalabiib ka badiya fadlan.